Lalao Ravalomanana : Mihoa-pefy tanteraka -
AccueilRaharaham-pirenenaLalao Ravalomanana : Mihoa-pefy tanteraka
28/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mazava tsara tokoa ny voalazan’ ny lalana mikasika ny fifamoivoizana fa tsy misy hafa tsy ireo filohana andrim-panjakana irery ihany no afaka mampiasa ‘’moto ’’ ho mpialoha lalana azy ireo. Voalazan ‘ny andininy faha – 40 mazava tsara anatin’ny lalàm-panorenana fa ireto avy no atao hoe filohana andrimpanjakana ny filoham-pirenena, praiministra lehiben’ ny governemanta, filohan’ ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona ary ny filohan ‘ny fitsarana avo momban’ ny lalàm-panorenena. Midika izany fa tsy filohan’andrim-panjakana velively ny ben’ ny tanana Antananarivo, na dia manana sata manokana aza. Ny mahagaga ankehitriny dia misora tena ho filohan’andrim-panjakana kaominaly angamba ny ben’ny tanana, ka moto miisa roa be izao no manokatra lalana ho azy. Raha mba am-pananjana anefa no anaovany izany tsy dia nanaitra ny maro loatra fa dia tena entina am-boletra, ka dia manao hitsin-dalana amin’ ireo moto sy fiara izay mibahana azy ireo. Raha ny zava – nitranga farany hitan’ ny maso dia moto iray nanao taingin-droa no nianjera teny amin’ iny lalana midina ny Rova mivoaka aty Ambanidia iny, satria dia saika notrongisin ‘ny kortezin’ i Lalao Ravalomanana. Manotany tena ihany koa ny rehetra hoe iza avy ireny mpiambina tsy mahalala fomba fa dia manao bondongerona ireo mpampiasa lalana ireo ? Ny fandraisana fepetra hentitra sy araka ny lalàna angamba no tsara raisin’ ny tompon’andraiki-panjakana manoloana izao fihetsika mamohehitra ataon’ny Ben’ny tanàn’Antananarivo Renivohitra izao.
Tsara ho fantatry ny ben’ny tanana fa na dia ny filohan’ ny fampihavanana Malagasy aza na ny CFM dia tsy voalazan ‘io anidiny faha 40 io hoe andrim-panjakana, na dia izay aza ny sata izay hijoroan’izy ireo. Tsiahivina amin-dramatoa Lalao Ravalomanana ihany koa fa na dia ny filohan’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana aza tsy manana ireny mpanokatra lalana ireny, na dia mazava ihany koa aza anatin’ ny lalàm-panorenana fa manana ny zo hiasa manerana an’i Madagasikara ny CENI eo amin’ ny fanomanana sy fikarakarana ny fifidianana. Ankoatran’ ny fanana moto mpanoka- dalana dia tsara ihany koa ny mampahatsiahy fa tsy azon’ olon-tsotra ampiasaina ny sainam-pirenena eo amin’ ny fitaratry ny fiara, raha toa tsy olom-boafidy izy tenany no mitondra izany. Noho izany dia mbola manainga ny tompon’andraikitra ihany koa hampihatra ny lalàna amin’ ireny olona ireny. Tsiahivina fa efa nisy tokoa ny fampianarana ny lalàna izay nataon’ ny tompon’andraikitry ny mpitandron’ ny filaminana manoloana ireny tsy fanarahan-dalàna ireny, saingy niato izany taty aoriana. Io izay lasa gaboraraka ka tsy fantatra mazava intsony hoe iza no iza, ary ny an-dry Ravalomanana Lalao aza dia toa lasa fialam-boly hatsiarovan’izy mivady ny fotoana taloha tamin’ izy ireo nitondra ny firenena angamba ny zava- misy ataon’izy ireo ankehitriny amin ‘ny fampiasan’izy ireo an’ireny « moto » mpanoka –dalana ireny.